राति उठ्ने र दिउँसो सुत्ने बानी छ ? यो जानकारी अवश्य पढ्नुहोस् नत्र पछुताउनु पर्ला !! | सुदुरपश्चिम खबर
राति उठ्ने र दिउँसो सुत्ने बानी छ ? यो जानकारी अवश्य पढ्नुहोस् नत्र पछुताउनु पर्ला !!
तर केही मानिसका लागि अलिकति आराम गर्नु पनि राम्रै हुन्छ । विद्यार्थीहरूले लगातार कैयौं घन्टा पढेपछि आराम गर्नका लागि दिउँसो एक झप्को लिनु ठीकै हुन्छ । वृद्धहरूका लागि पनि शरीर र मस्तिष्कलाई आराम दिनका लागि दिउँसो सुत्नु ठीक हुन्छ । असाध्यै क्रोधी मान्छेले पनि दिउँसो सुत्दा दिमाग शान्त हुन्छ । कडा शारीरिक मेहनत गर्ने मानिसले पनि शरीरका अंगलाई आराम दिन दिउँसो सुत्दा हुन्छ । (gnewsnepal बाट सभार)